चार सय नागरिक बेपत्ता कि मृतक ? | CHALKHEL.COM
Home पत्रपत्रिकाबाट चार सय नागरिक बेपत्ता कि मृतक ?
बेपत्ता आयोगले द्वन्द्वकालमा हराएका झन्डै चार सय नागरिकको ‘मृत्यु भएको’ अनुमानसहित बाँकी छानबिनका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) मा फाइल पठाएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
Previous articleमदिरा उधोगलाई अनुमति दिन मन्त्रीको चलखेल
Next articleराजधानीमा भएका तीन बलात्कारका घटना